Just markabka ka boodaan si ay Android iPhone oo kaliya si aad u ogaato in barnaamijyadooda aad jeceshahay Android si toos ah aan lagu rakibi karo on your dhaldhalaalaan iPhone? Ha welwelina, barnaamijyadooda badan Android leeyihiin qoraalkii ay iPhone oo aad kala bixi karto Lugood App Store. Xataa haddii ay jirto version iPhone ma laga heli karaa, waxaad weli heli kartaa kale oo badan ama bedelo.
Qaybta 1. 7 Free Google Apps u iPhone
Qaybta 2. Top 10 Free iPhone Apps
Just isha ku barnaamijyadooda Google, sida app cod Google u iPhone, iyo doonayso inaad ku isticmaasho aad iPhone? Waa wax weyn. Waxaa tahay badan barnaamijyadooda Google cabsi badan oo keeni karta badan oo xiiso leh iyo sahlo marka la isticmaalayo aad iPhone. In qayb hoose, waan ku taxan baxay 7 iyaga ka mid ah. Hadda, akhri on.
Hel ka badan Google barnaamijyadooda ku iPhone >>
Google Search la tilmaamay sida ugu fiican ee Google ka mid app. Waxaa si deg deg ah ka heli kartaa waxa aad u baahan tahay oo uu ku tuso natiijo raadinta. Ma ahan oo keliya ku saabsan raadinaya, laakiin sidoo kale ku saabsan Google Hadda. Google Hadda si toos ah idin tusiyo macluumaadka waxtar aad u baahan tahay, sida cimilada, gaadiidka, news, updates aad rabtaa, ciyaaraha, dhacdooyinka iyo ku siinayaa tilmaamaha in meel kasta oo aad rabto inaad aado. Waxaad dhahdaa "OK, Google" si aad u weydiiso su'aal kasta iyo Google aad ku jawaabi doontaan.
More info oo ku saabsan app Search Google u iPhone >>
Google Maps waa khariidad socodyada loogu talagalay in falgali aad dunida si fudud oo dhakhso ah. Waxa aad bixisaa ah navigations jeedin-by-jeedo GPS kaalinta kasta oo aad rabto in aad si ay u tagaan oo ay socod, baaskiilka iyo wadida. Sidaa daraadeed, waxaad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan wararka dhacdada, gaadiidka nool oo firfircoon dib-u-routing.
More info oo ku saabsan Google Maps app for iPhone >>
Google Translation waa mid ka mid ah ugu barnaamijyadooda cajiib ah, taasoo u saamaxaaya in ay u gudbiyaan 80 luqadood. Waa anfacaya oo faa'iido leh marka aad barato af qalaad ah, safri dibadda ama la kulmaan caqabadaha kale ee afka.
More info oo ku saabsan app Translation Google u iPhone >>
App Chrome u iPhone baadhaa si dhakhso ah oo soo bandhigaan natiijooyinka caawin in aad si. Waxay ku siinaysaa awood u leeyahay inuu si habsami leh u wareegi ka mid tab in kale. Haddii aad saxiixdo in Chrome, kuwaasoo ah idinka ee u hagaagsan kartaa waayo-aragnimo Chrome shakhsi, sida isha furan, Bookmarks, sirta ah iyo in ka badan ka kombiyuutarka si aad iPhone.
Badan oo ku saabsan Chrome app for iPhone >> Baro
The app Gmail oggolaanaysa in aad maamulato ilaa 5 xisaab email meel kastoo aad tagtidba. Waxaa maamula emails aad by lagu calaamadiyey, archiving, la tirtiro, bilowday iyo ka warbixinta spam. Waxay ka caawisaa si ay u baadhaan mail oo dhan si dhakhso ah oo u soo diri-waqtiga dhabta ah ee farriimaha. Ka sokow, waxa kale oo aad u diri kartaa ama heli emails leh ku lifaaqan.
Badan oo ku saabsan Gmail app for iPhone >> Baro
Iyadoo app YouTube ee iPhone, waxaad si fudud u qaadi kartaa ilaa jecel videos aad, watch video ah halka mid kale raadinaya. Marka aad ka heli video xiiso leh, aad u wadaagi karaan Facebook, Twitter, Google + iyo Email. Ka sokow, waxaad ka raadin kartaa playlists aad jeceshahay u riyaaqayaa on go ah.
Badan oo ku saabsan YouTube app for iPhone >> Baro
Codka Google ku siinayaa awood ay ku soo dir farriimaha qoraalka ah si ay u telefoonada kasta oo Maraykanka lacag la'aan ah oo ay wacaan caalamiga ah ee heerka u hooseeya. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad leeyihiin in ay helaan farriimaha looduubay oo aad la qoraal. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu kaliya loo isticmaali karaa in Mareykanka in muddo ah.
Baro wax badan oo ku saabsan Google Voice app fpr iPhone >>
Qaybta socda waxay muujinaysaa aad hogaanka 10-ada oo lacag la'aan ah iPhone. Just fiirino iyaga at. Haddii ay jiraan app kasta oo aad ka heli interestes, waxaad iyaga kala soo bixi kartaa ka Lugood App Store iyo rakibi aad iPhone.
Facebook waa network ugu caansan bulshada ee adduunka oo dhan. Sidaa daraadeed, aad u cusbooneysiin karaa xaaladdaada, load iyo wadaagno photos, video iyo in ka badan. Intaa waxaa dheer, waxaad si fudud u qaadi kartaa ilaa farriimo, dhacdooyinka, bogagga, news feed, lagu sheekeysto iyo in ka badan.
Hel info badan oo ku saabsan Facebook app for iPhone >>
Inkastoo FaceTime waa app weyn oo aad u video ama wac audio dadka kale, waxay u baahan tahay Mac ama taageeray iDevice ah. Marka la eego tani, Skype waa mid ka mid ah kugu habboon. Waxay leedahay interface user-friendly ah, kuu wacaan, diro fariimaha deg dega ah iyo siro kasta oo kale oo qaba account Skype ah oo lacag la'aan ah. Sidaa daraadeed, waxa kale oo aad sawiro leh oo aan xad size sawirka wadaagi karaan qoysaska iyo saaxiibada aad,.
Hel info badan oo ku saabsan Skype app for iPhone >>
Sida Facebook, Twitter sidoo kale waa shabakad bulsho aad loo jecel yahay. Kadib markii in Twitter, waxaad la xiriiri kartaa oo aad qoysaska, saaxiibada iyo dadka kale mar walba iyo meel walba, naftaada la comments, fikrado, videos iyo sawiro. Ka sokow, aad awoodo inuu la qabsado oo ku saabsan waxa ka dhacaya idinku wareegsan oo dunida oo dhan.
Hel info badan oo ku saabsan app Twitter u iPhone >>
Instagram siinayaa hab fudud oo ay qabsadaan oo ay wadaagaan daqiiqado xusuus via sawiro iyo videos saaxiibadaa, qoysaska iyo kuwa kale. Waxaad astaysto kasta oo sawir iyo video la saamaynta filter qurux badan iyo caadadii dhisay, sida XPro-ll, Kac, Earlybird, iwm Intaa waxaa dheer, aad posts soo awoodaan in ay saaxiibadaa, iyo sidoo kale raacaan posts ka soo diray oo aad saaxiibo. Samaynta isdhexgalka joogto ah la saaxiibo by siiyo ama qaata kooxaha iyo comments.
Badan oo ku saabsan Instagram app for iPhone >> Baro
WordPress waa app aad u anfacaya oo wanaagsan iPhone. Waxa aad bixisaa meel 2GB lacag la'aan ah si aad u kaydiso files, oo ay ku jiraan sawirrada, videos, Excel, PPT, PDF, Doc, TXT iyo noocyada ka badan files daruurta. Markaas, mar kasta oo aad u baahan tahay, waxaad iyaga ka heli kartaa ku saabsan iPhone. Waxa ay si fiican maraya files waaweyn oo si xor ah aad qoysaska, asxaabta iyo kuwa kale la wadaago.
Badan oo ku saabsan DropBox app for iPhone >> Baro
Sida ay magaceeda soo jeedisay, Evernote waa app ah note qaadashada si sahlan loo isticmaalo oo toos ah oo iPhone. Waxay ka dhigaysa mid aad u sahlan si aad u hesho qoraalada aad ku iDevice oo dhan aad isticmaasho. Waxaa syncs oo dhan qoraalada iyada oo computer iyo iDevices aad isticmaasho iyo badbaadin daruurta ku. Ka sokow, waxaa aad u saamaxaaya in ay qaadi karto qoraal, record audio iyo video qoraalo, sawiro qabsaday iyo aad u badan. Waxaad ka arki kartaa ka kooban waqti kasta iyo meel kasta.
Badan oo ku saabsan Evernote app for iPhone >> Baro
Kaliya fiiri qaar ka mid ah app for si fudud sixiddiisa sawiro aad iPhone? Adobe Photoshop Express tahay waxa aad doonayso. Waxay kaa caawinaysaa inaad toosi, afaysto, isku shaandheyn, noola sawir kasta oo ay qabsato gaadhista si fudud. Ka dib markii tafatirka, waxaad daabacan kartaa sawirka ka baxo ama u wadaagno si aad qoysaska, saaxiibada iyo dadka kale via Email, qoraalka, Facebook, Twitter, iwm
Baro qaababka badan oo ku saabsan Adobe Photoshop Express app for iPhone >>
iBooks waa app la yaab leh in aad kala soo bixi oo akhri buugaagta iPhone Marka socda aad iPhone, waxaad kala soo bixi kartaa buugaag classic, bestsellers iyo wax kasta oo dadka kale oo aad jeceshahay dukaanka e-buugga. Marka aad akhriyi hal buug, waxaad dooran kartaa noocyada aad jeceshahay iyo midabkiinaba, iyo muujiyo ereyada, weedhaha, iyo baaragaraafyada daro. Ka sokow, aad la wadaagto kartaa comments, fikrado, fikrado ku saabsan buugaag aad jeceshahay la Facebook, Twitter, Mail iyo Farriimihiisa saaxiibo aad. Haddii aad isticmaasho iCloud, iBooks cusbooneysiin kartaa Bookmarks, xooga, qoraalada iyo aad u badan meel kasta.
Baro app badan oo ku saabsan iBooks u iPhone >>
Flipboard waxaa lagu tilmaamaa magazine gaarka ah oo aad ka ogaan kartaa, isku xiro iyo la wadaagto waxa ka dhacaya adduunka si fudud. Waxay leedahay design raaxo leh oo awood u aad u simbiriirixan bogagga kor iyo hoos. Marka aad hesho qaar ka mid ah mawduucyo xiiso leh, waxaad ku dari kartaa shabakadaha bulshada, sida Facebook, Instagram, Twitter oo dheeraad ah si aad u hesho links ka saaxiibadaa, qoysaska iyo kuwa kale.
Badan oo ku saabsan Flipboard app for iPhone >> Baro
Camera Awesome kaliya magaceeda, kaas oo la saamaynta xirfad cajiib ah ka dhigaysa sawiro aad si fiican u qalmo. Sidaa daraadeed, aad u xoojin karto sawiro aad by dhejinta waaraadka galay badan oo presets. Waxaa laayey si dhakhso ah oo af qaadataa, taas oo ka dhigaysa sawiro fiican qaawan. Ka dib markii qaadashada sawiro, waxaad u isticmaali kartaa si aad ula wadaagto Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Picasa oo dheeraad ah saaxiibo aad.
Baro wax badan oo ku saabsan Camera app Awesome u iPhone >>
Ka iPhone Bedelka Content in PC
Nuqul Faylal ay ka Samsung si iPhone
Nuqul Xiriirada ka BlackBerry si iPhone
Faylal ay ka dhaqaaq Nokia si iPhone
iPhone Transfer Tool Waxaad u
Waraaqda Lugood ee kaabta File u iPhone / Android
> Resource > Apps > 17 Best Free iPhone Apps Waxaad u